ကလေးများ စိတ်ထားနှင့် ဉာဏ်ရည် မြင့်စေချင်လျှင် | ဧရာဝတီ
ခေတ်ဘုန်းသစ်| February 20, 2013 | Hits:16,566
34 | | သိက္ခာရှိတဲ့ တရားမျှတတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုကို ရလာဖို့ အတွက် အကြောက်တရားကို အခြေခံတဲ့နည်းတွေနဲ့ ကလေးတို့ကို ခြိမ်းခြောက်ပုံသွင်းလို့မရနိုင်ပါ (ဓာတ်ပုံ – ရဲနည် / ဧရာဝတီ)
မူကြိုတွေ ကလေးတွေကို ပိုညံ့သွားစေသလား
လျစ်လျှူ မရှုသင့်တော့တဲ့ မြန်မာပြည် အခြေခံပညာရေး
ကလေးတွေ မေးခွန်းမေးခွင့်ရတဲ့ ခေတ်ကို ဘယ်တော့ ရောက်မလဲ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment angel February 20, 2013 - 12:20 pm	သိပ်ကောင်းတဲ့အသိပညာပေးစာလေးပါ။ဆရာမဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေ။
များဒီလိုစာမျိုးများများဖတ်နိုင်ဖို့ မိဘတွေစာဖတ်ချိန်ရှိအောင်နဲ့ အလွယ်တစ်ကူဖတ်နိုင်
Reply	Shwe Thway February 20, 2013 - 12:53 pm	The western way of raising children indeed. Beating, threatening and intimidating made Than Shwe and his associates to ruin the lives of the Burmese people. They really know how to nurture the children of Burma. That’s why the people are afraid of their own shadows.
Reply	Seng Raw April 11, 2013 - 3:41 pm	ကလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာပေဆောင်းပါးတွေ ရှားပါးနေခိုက်မှာ ခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ ရေးပေးလို့ ဆရာမကို မြန်မာပြည်က ကလေးတွေအားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပီးလည်း ရေးသားဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါစေ။
Reply	Kyaw Kyaw May 11, 2014 - 1:08 pm	သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေပြီး မိဘတိုင်း ဝယ်ယူသိမ်းဆည်း ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအမျိုးအစားပါ။ စာရေးဆရာမနှင့် ဧရာဝတီဝိုင်းတော်သားတွေကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Reply	Wai Min June 2, 2014 - 3:13 pm	Wai Min